China Aluminium eludongeni Panel mveliso kunye nabathengisi | Alucosun
I-ALUMINUM COMPOSITE PANEL (Yodonga olungaphezulu)
Iphaneli yeAluminiyam edityanisiweyo
Ngokuphuculwa kwetekhnoloji engundoqo, i-Alucosun FR iphuhliselwe iimfuno ezingqongqo zemigaqo yokubuyisa umva kwimveliso yoyilo. I-Alucosun FR iceliwe ngabazobi behlabathi kunye nabanini bezakhiwo kungekuphela ngeepropathi zayo ezinje ngobunkunkqele obugqithisileyo, ukuqina okuphezulu kodwa amandla okuqaqamba, kodwa, okona kubaluleke kakhulu, ukusebenza kwayo okumangalisayo ekuqinisekiseni ubungqina bokuxhamla kwizimbiwa zayo. undoqo.
I-Varitey yemibala enombala omkhulu wemibala esemgangathweni kunye nesiko, kunye ne-mat kunye ne-gloss ephezulu. isipili kunye nebrashi nished ngokunjalo I-Alucosun ngumvelisi wokuqala onika iipaneli ezibanzi (2000mm) ixhasa ushicilelo lwefomathi ebanzi.
KULULA I-PEIL FILM
Ifilimu eNqabileyo yoKhuseleko oluLula enokususwa ngokulula naphi na xa usebenzisa. Iphaneli yomphezulu ayizukubamba nakuphi na ukuhla ekuphelisweni kwenkqubo yokususa. I-viscosity yeFilimu ayiphambuki ngokuhamba kwexesha kwiziphumo zokunyusa ishelfu-yobomi beAlucosun Sign ®.
INKQUBO ETHEMBEKILEYO yeQA
Inkqubo esekwe kakuhle kunye ne-QA eqinisekisiweyo iqinisekisa umgangatho wemveliso esiyizisayo. Kufezekiswe ngokudibanisa ngokugqibeleleyo iLebhu epheleleyo kunye nabasebenzi abanezakhono. Yonke ibhetshi yemveliso ivavanywa rhoqo kwiisampulu zexesha kwaye iingxelo zigcinwa zigcinwe kwindawo ekhuselekileyo yokugcina umkhondo wexesha elizayo.
Sisebenza ubusuku nemini sinesitokhwe esaneleyo seMathiriyeli ekrwada yokucacisa ngeendlela ezahlukeneyo ukulungiselela abathengi bethu kwihlabathi liphela. Ukongeza, sibekwe ngobuchule kufutshane nemithombo evumela ukuba senze iimveliso zesiko ngokunjalo, zenza ukuba ixesha lethu lokukhokela lifutshane kunabanye abavelisi.
Senze igalelo elibonakalayo kushishino lweMpawu ngokuphuhlisa imveliso entsha. Icandelo lethu le-R & D lisebenzisana nendawo yokuvelisa ye-PPG yokuphuhlisa ipeyinti ekhethekileyo ye-PE enokuhambelana nazo zonke iintlobo zoomatshini bokuprinta kwidijithali. Ngeli xesha, sinzima ukusebenza ekuphuhliseni imveliso entsha ethe kratya kwaye ikhuselekile kubathengi bethu.
Uphawu lweAlucosun®Iphaneli yealuminium edityanisiweyo yenziwa ngamashiti amabini ealuminium kunye nomxholo we-polyethylene olaminethiweyo kwinkqubo eqhubekayo enobushushu obuphezulu.
Umba Uluhlu Ubungakanani obuqhelekileyo
Ubukhulu bePaneli (mm) 2-8mm 2mm, 3mm, 4mm, 6mm
Ubunzima beAluminiyam yoLusu (mm) 0.1-0.5mm 0.12mm, 0.15mm, 0.21mm, 0.3mm
Ububanzi 1000-2000mm 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm
Ubude ≥1000mm 2440mm, 3050mm, 3660mm, 4050mm
Ubukhulu (mm) -0 + 0.2
Ububanzi (mm) ± 2
Ubude (mm) ± 3
Ubukhulu besaphetha (mm) .5
Ubukhulu besikwere (mm) .5
Ipeyinti Ukutyeba (micron) 18-20µm
Ipensile Ukuqina 2H
Ubungqingqwa bokuThwala 2T
Ubushushu Resistance -40 ℃ ~ + 80 ℃
Amandla eeMpembelelo (Kg / cm2) 50kg / cm2
Ukumelana naManzi abilayo 2hrs, akukho tshintsho
Ukuchasana ne-Acid I-5% HCL, 24hrs alukho utshintsho
Ukumelana nealkali I-5% ye-NaOH, i-24hrs alukho utshintsho
Ukuxhathisa ioyile 20 # ioli yeenjini, akukho tshintsho
Ukumelana nesinyibilikisi Amaxesha angama-200 nguMEK
Ukucoca ukuxhathisa Amaxesha ali-1000 ngaphandle kotshintsho
Amandla ePeel 180 ° ＞ 5 INewton / mm
Uhlobo lweAlloy I-AA3003 / AA1100
Inkqubo yepeyinti / indlela / ispecial Ipholiyesta / Ukutyabeka i-Coil / AAMA
Iglasi @ 60 ° 70% -100%
IsiGaba seMatte 20% -40%
Ukulahleka kwesandi sokuThumela (dB) 23-25
Ixabiso lexabiso (MK / W) 0.0045.0078 0.0110
Ixabiso (W / MK) 5.7 5.6 5.5
Ulwandiso lweLiner Thermal 2.4 mm / m @ rhoqo nge-100 ° C.
Uphawu lweAlucosun ®iipaneli zisetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo abantu abahlangana nazo kubomi bemihla ngemihla. Yimveliso eluncedo kwaye eguquguqukayo kwimiqondiso kunye nomzi mveliso wentengiso wendalo entle.
UKWENZIWA KOPHAWULELO NEENKONZO ZEvenkile
Ngombulelo kuguquko olubalaseleyo kunye nokuma kwe-Alucosun Sign ®PE, izifanela kakuhle kakhulu ekwenziweni kweempawu, imiboniso, iindawo zemiboniso, njl.
Uphawu lweAlucosun® I-PE, i-PPG eqinisekisiweyo yepeyinti, enemibala eyahlukeneyo kunye nokukhethwa kwe-gloss, inika isisombululo esifanelekileyo sokuhombisa ngaphakathi.
Ukuprintwa kwe-LED / UV
Uphawu lweAlucosun ®inikeza zombini UV yoshicilelo yedijithali kunye noshicilelo LED. Iyakwazi ukuhambelana nazo zonke iintlobo zoomatshini bokushicilela, umphezulu wepaneli nawo ukwazi ukushicilela kwidijithali ye-LED. Ngokuqinisekileyo, iteknoloji yokushicilela i-LED inokugcina amandla angama-50%. Iindleko zokukhanya kwe-LED zingasetyenziselwa iiyure ezingama-4000, kunye nobuhlobo bendalo, ukuzinza, nokusebenza ngokulula. Kufanelekile ukuba ibe ngumkhwa wokushicilela ishishini.
Lonke uphawu lweAlucosun® Ukugqitywa kuza iminyaka emi-5 iwaranti yokusetyenziswa kwangaphandle.Ibrashi kunye nesipili sokugqiba ngenkqubo eyahlukileyo akuqinisekiswanga kusicelo esingaphandle kwesiqinisekiso sombala ngqo sinxibelelane nathi ngeenkcukacha.
Ukususela ekuqaleni, uphawu lwe-Alucosun ®ihlala ihleli ivule amehlo kuyo yonke indlela, ukusuka ekwamkelweni kwezinto ezingafunekiyo ukuya kwiimveliso zokugqibela, ezizalisekiswa yinkqubo yolawulo lomgangatho- eyakhiwe ngokugqibeleleyo ngabahloli abaziingcali kunye nezixhobo zelebhu eziphambili, iqinisekisa zonke iimveliso ngokungqinelana nemigangatho yezizwe ngezizwe.
Uphawu lweAlucosun ®Iqela lizimisele ukuxhasa abathengi bethu ngokubonelela ngexesha lokuhanjiswa kweemveliso ezithembakeleyo kunye neenkonzo zexabiso elikhethekileyo. Zonke ezi zinto zinokukunceda ekufumaneni inzuzo yokukhuphisana kwintengiso yakho. Sijonge ukugcina umbono wethu kunye nomsebenzi wethu ngokuhlala sifuna ukuphuculwa kunye nophuhliso ngemfundo eqhubekayo kunye nokufunda.
Siyakumema ukuba ubeke iimveliso zethu kuvavanyo, uya kufumana ngaphezulu kunokuba ubulindele!
Ayisiyiyo kuphela ukufaneleka kodwa ikwacacisa nomgangatho wokuphakama.
Egqithileyo Aluminium camera Ikhoyili
Okulandelayo: I-Alucosun FR A2
Iiphaneli eziDibeneyo zeAluminium Aluminium
Iphaneli yeAluminiyam edibeneyo
Iiphaneli zeAluminiyam ezidityanisiweyo
IPvdf Aluminium iPhaneli edityanisiweyo
I-Alucosun FR A2
Ipaki yeHushi Industrial, idolophu yaseHuashi, iSixeko saseJiangyin, kwiPhondo laseJiangsu, China, 214421.
Izinto ezidibeneyo (iJiangsu) zikhethwe ...
Ukusukela nge-1 kaSeptemba, i-China izakuthatha ngokudibeneyo ...
I-Antibacterial Polyurethane entsha inceda ukuphilisa ...
© Copyright - 2010-2020: Wisdom Metal Composites Ltd, Onke amalungelo agciniwe.